लाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना….! – Gorkhali Dainik
October 6, 2020 182
तपाईले केवल यस सपनालाई बुझ्नु जरुरी छ । यसबाहेक यदि ज्योतिष शास्त्रको अनुसार यदि तपाईलाई यस्तो सपना आएमा मतलब हुन्छ कि सपना पछि तपाईको गर्ने कार्यमा जरुर सफलता मिल्नेवाला छ ।
यदि हामी सिधै भन्यौं भने यो सपना वास्तवमै धेरै शुभ हुनेछ । यस सपनाको मतलब हुन्छ कि तपाई धनवान भन्ने बाटोमा दौडिरहनुभएको छ ।
यदि तपार्ई पनि सुतेको समयमा यस्तो सपना देख्नुभएको छ भने यसलाई अन्देखा गर्ने कोशिश नगर्नुहोला । किनकी यो सपना तपाईको सफलताको सङ्केत हो । यस्तो सपना लाखौँमध्ये कुनै एक मानिसले मात्र देख्ने गरेको पाइन्छ ।]
Prevयसपालिको दशैँमा घरमा पूजा, इन्टरनेटबाट आशीर्वाद…..::संस्कृतिविदको सुझाब…!
Nextपैसा राख्ने दराज …घरको कुन दिशामा…राख्ने …?